Wararka - Waa maxay Sumadda Bannaanka ee ugu Caansan Dunida?
Arc 'Teryx （Kanada): Sumadda ugu sarreysa bannaanka ee Kanada, oo lagu aasaasay VANCOUVER, Kanada 1989, xarunteeda, istuudiyaha naqshadeynta, iyo khadka wax soo saarka ugu weyn weli waxay ku taal Vancouver. Sababtoo ah ku dhowaad waali ahaan farsamooyin cusub iyo tiknoolajiyad cusub, in ka badan toban sano, waxay ku kortay sumcad Waqooyiga Ameerika iyo xitaa sumcad caalami ah oo dibadda ah, oo leh alaab wanaagsan oo ku saabsan dharka iyo boorsooyinka. Waxyaabaha ay soo saaraan badanaa waxay ku lug leeyihiin socodka, fuulitaanka iyo barafka iyo isboortiga barafka, boorsooyinka dhabarka, dharka, fiirsashada faahfaahinta.
Baakad Weyn (Jarmal): boorsada lagu seexdo boorsada dhabarka.
Columbia (Mareykanka): sumadda ugu horreysa ee bannaanka Mareykanka, dharka roobka, koofiyadaha roobka, surwaalka iyo agabyada banaanka, dabaylaha, T-shaati, shaati, surwaal shaqeynaya, boorsooyinka dhabarka, kabaha iyo dharka barafka, iwm.
Jack Wolf Maqaarka (Jarmalka): summaddii ugu horreysay ee bannaanka taal. Boorsooyinka dhabarka, kabaha dibadda, teendhooyinka, bacaha jiifka, dharka iyo agabyada kala duwan, iwm.
Lafuma (Faransiiska): boorsooyinka caanka ah ee caanka ah ee Faransiiska, kabaha bannaanka, teendhooyinka, bacaha jiifka, dharka safarka ee kala duwan iyo agabyada, agabka xerada, iwm.
LL Bean (USA): waxay iibisaa alaabooyin kala duwan oo xilliyada firaaqada ah, iyo sidoo kale qalab dibedda ah. Dhammaan alaabteeda waxaa lagu iibiyaa amar boostada iyo iibka tooska ah ee tooska ah, iyada oo aan wakiilo lahayn.
Marmot (Mareykanka): dharka barafka, hoos bacda jiifka, iyo teendhooyinka buuraha alpine ayaa caan ku ah dadka jecel buuraha.
Mountain Hardware (USA): dharka banaanka, teendhooyinka, faahfaahinta ugufiican, hogaamiyaha dharka banaanka.
Patagonia (Mareykanka): PATAGONIA waa mid ka mid ah noocyada dharka bannaanka ugu weyn ee Mareykanka iyo Yurub, waxayna leedahay dukaamo badan oo magac ganacsi oo adduunka oo dhan ah. PATAGONIA marar dhif ah ayaa laga dhimayaa, taas oo ka caawisay inuu dhiso sawir heer sare ah. Wax soo saarka Patagonia ayaa caan ku ah aduunka oo dhan iyadoo diiradda la saarayo ilaalinta deegaanka iyo ilaalinta kheyraadka. Patagonia fikradeeda naqshadeynta naqshadeynta iyo shuruudaha tayada dalbanaya waxay ka dhigeysaa alaabteeda inay ku guuleysatay abaalmarino badan qiimeyn badan oo qalabka warbaahinta dibadda ah, waxaana lagu qiimeeyay inay tahay mid ka mid ah noocyada ugu jecel ee ay jecel yihiin banaanka. Dharka laga jaro ayaa ka fiican alaabada kale ee banaanka, faahfaahintuna sidoo kale waa heer sare. Wax soo saarkiisa dhogorta ayaa aad caan u ah.
Vaude (Jarmalka): alaabooyinka waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan alaabada dibadda. Marka laga hadlayo dharka, waxay leedahay qaar ka mid ah qalabkeeda gaarka loo leeyahay.
The North Face (USA): alaabooyinku waa kuwa adkeysi badan, waxayna ka wareegeen alaabooyinka dhammaadka u sarreeya una wareegeen alaabooyin caan ah.
T'tiss (, Jarmalka): funaanado, funaanado, jaakado, surwaal aan caadi ahayn, iwm.